Izindaba - UUGreenPower Ikhipha Izisombululo Ezine Zokushaja Okusha
I-UUGreenPower Ikhipha Izixazululo Ezine Zokushaja!
Ithiphu eyi-Core: ngo-Agasti 26, umbukiso wemboni wezindawo zokushaja wase-Shanghai owawuse-Shanghai New International Expo Center wabanjwa. Kulo mbukiso, amabhizinisi amaningi ezinkanyezi ezifuywayo nakwamanye amazwe afaka izixazululo zokushaja ezihlakaniphile, izixazululo zezinsiza ezisezingeni eliphezulu, ubuchwepheshe bokushaja obuphambili, uhlelo lokupaka oluhlakaniphile, ukunikezwa kwamandla ezimoto, i-photovoltaic, uhlelo lokugcina amandla, njll.
Ukuze kuxazululwe inkinga eyanda ngamandla yezamandla nezinkinga zemvelo, kwenzeke izinguquko ezinkulu embonini yezimoto emhlabeni. Izimoto ezintsha zamandla seziphenduke isu lokuthuthuka lamazwe ahlukahlukene, futhi ukwakheka kocwaningo lobuchwepheshe nentuthuko kanye nenqubo yokwenza izimboni kukhuthazwa njalo. NgoDisemba 2018, iNational Development and Reform Commission, ukuphathwa kwamandla kazwelonke, uMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi kanye noMnyango Wezezimali ngokuhlanganyela bakhipha "isaziso sohlelo lokusebenza lokwenza ngcono amandla okuxhasa amashaji ezimoto ezintsha zamandla", kudinga ngokusobala "ukusheshisa ucwaningo nokusetshenziswa kobuchwepheshe bokushaja amandla amakhulu", "ukwakha amazinga obuchwepheshe wokushaja amandla kagesi amabhasi kagesi, nokwenza ucwaningo nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokushaja amandla amakhulu ezimoto zabagibeli kanye nocwaningo olujwayelekile lwangaphambi kokuxwayisa umsebenzi ". NgoJulayi 2020, iState Grid Corporation yaseChina, kanye neChina Power Grid Corporation, i-chademo protocol Association of Japan neTokyo Electric Power Co., Ltd., ngokuhlanganyela bakhipha iphepha elimhlophe mayelana nokuqhutshwa kobuchwepheshe bokushaja okwenziwa nguChajiji wezimoto zikagesi, nakho okukhomba ukuthi isizukulwane esisha sobuchwepheshe bokushaja obuya esigabeni esisha sokwakheka okujwayelekile nokusetshenziswa kwezimboni, nokushaja amandla amakhulu kwamukelwa ngabasebenza embonini abaningi.
Ngokumangazayo, kulo mbukiso, iShenzhen UUGreenPower Electric Co, Ltd. (ngemuva kwalokhu ebizwa nge-UUGreenPower), umholi we-EV ukushaja nokukhipha izixazululo ezihlakaniphile, waqhubekisela phambili phambili ekuthuthukiseni ubuchwepheshe, futhi wethula izixazululo ezine zokushaja ngokuphelele , kanye ne-UBC 75010 bidirectional V2G ukushaja inqwaba, engahlangabezana nezimo ezinhlobonhlobo zohlelo lokusebenza lwe-V2G ngokuzayo, kususa igagasi lomvuthwandaba.
Ngokwenethiwekhi yenqwaba yokushaja yaseChina, i-UUGreenPower iqhubeke ngokuqhubekayo nokwethula uchungechunge lomkhiqizo omningi wokushaja nethimba layo eliqinile le-R & D neminyaka yobuchwepheshe obuqoqiwe emkhakheni wokuguqulwa kwamandla, futhi igcine isikhundla sayo esihamba phambili kwezobuchwepheshe embonini ukuze isikhathi eside. Embukisweni wokugcina, imojuli yokushaja ephezulu evikela i-IP65, eyaqala ukwethulwa embonini ngokwenza izinto ezintsha ezimele, ifake isibhamu engalweni esiqondisweni sentuthuko sokuthembeka okuphezulu nokutholakala okuphezulu embonini yokushaja.
Embukisweni walo nyaka, imikhiqizo emisha enhlobonhlobo eyethulwe yi-UUGreenPower ihehe abantu abaningi abavela kule mboni ukuthi babuke nemithombo yezindaba yezimboni ukuze bancintisane ngayo. I-China ishaja inqwaba yenqwaba iphinde yaxoxa ngokukhethekile noBo Jianguo, umphathi jikelele we-UUGreenPower, owasethulela imikhiqizo emisha ngesineke.
Izixazululo ezine ezinkulu zokushaja
Isixazululo sokushaja okusheshayo esingu-40kW
Ngokusho kukaBai Jianguo, umphathi jikelele we-UUGreenPower, i-UUGreenPower iyaqhubeka nesikhundla sayo sokuhola emkhakheni wezobuchwepheshe bokushaja amandla amakhulu. Ngobuchwepheshe bamandla bamuva nobuchwepheshe bokusabalalisa ukushisa, imojula yokushaja amandla amakhulu engama-40kW igcina usayizi ofanayo kanye ne-interface ne-module engu-30kW. Ekuklanyeni kwenqwaba yonke, isikhala nezindleko zayo yonke inqwaba kuyagcinwa. Ubuningi bamandla kuyo yonke inqwaba bunyuswe ngo-30%, kanti intengo yeyunithi nge-watt ngayinye yehle ngo-10%.
Umhlinzeki wokuqala embonini ukukhuthaza usayizi ofanayo, amandla aphezulu emodyuli yokushaja engu-40kW, amandla kagesi afinyelela ku-60W / ku3, ehola umkhakha wokuma komkhakha.
Izinga ezintathu topology top Vienna PFC, ezine LLC interleaved topology parallel, magnetic integrated coupling technology, precise digital control algorithm, optimimal thermal design layout
Vumelanisa nomzila wokuthuthuka wamandla aphezulu nokushaja okusheshayo embonini
Ubuningi bamandla kuyo yonke inqwaba bonyuswe ngo-30%, kanti izindleko zamanani weyunithi nge-watt ngayinye yehliswe ngo-10%
Isixazululo sokushaja okusheshayo se-IP65
Ingxenye eyinhloko yenqwaba yokushaja iyisimo sokushaja. Ukuthembeka nokusimama kokusebenza kwayo kuyisihluthulelo sokwethembeka kohlelo lwendawo yokushaja. Ngokwanda okusheshayo kwenani lezinqwaba zokushaja ezifakwe eChina, umehluko wokusebenza kwangempela kokusebenza kwamamojula wokushaja uboniswa kancane kancane. Eminyakeni yamuva, izinga lokwehluleka kwemodyuli yokushaja kube yinkinga enkulu ethinta ukutholakala kohlelo lwamaphoyinti wokushaja.
Ngokuya ngokuhlaziywa kochwepheshe bemboni, izinqwaba zokushaja ngokuvamile zifakwa ngaphandle endaweni enothuli, okushisa okuphezulu nemvula evezwe endaweni. Yize ibanga lokuvikelwa lezinqwaba zokushaja ngokuvamile kuyi-IP54, ukwakheka kwemodyuli yokushaja imvamisa kuyi-IP20 ngokuklanywa komoya. Uthuli, inkungu kasawoti, ukufinyela kwamanzi emvula emvelweni nakanjani kuzongena kule module, bese kuthinta impilo yesevisi. Ngakho-ke, ukuxazulula le nkinga ngokuyisisekelo, ukwenza ngcono ukuvikelwa kwemvelo kwemodyuli yokushaja kuzoba ngukhiye.
Kulo mbukiso, i-UUGreenPower ikhombise inguqulo ethuthukisiwe engu-2.0 yemodyuli yayo yokuvikela okuphezulu ye-IP65. Ngemuva kokuqinisekiswa kwemvelo okungaphezu konyaka owodwa, inguqulo entsha yemodyuli ingafakwa emakethe ngezinga elikhulu kungekudala. Imodyuli yokuvikelwa okuphezulu ye-IP65 isebenzisa ubuchwepheshe obunobunikazi obuzimele obunamandla bokushisa ukushisa, futhi ukuthembeka kohlelo kuthuthukiswa kakhulu. Umjikelezo wempilo wonke we-TCO wesistimu yokushaja ungagcinwa cishe nge-40000 RMB ngokuqhathaniswa ne-module ye-IP20 eminyakeni eyi-10.
Ifanele indawo enzima yokufaka isicelo njengothuli lwesihlabathi, inkungu kasawoti nokujiya
Ukwethenjelwa kwemodyuli kuyathuthukiswa, ukunakekelwa mahhala iminyaka engu-5, futhi izindleko zokugcina zonyaka zigcinwa cishe nge-3000 RMB / ngonyaka
Yonke inqwaba yokushaja ithuthukiselwa ku-IP65 ngaphandle kokuklanywa okungangeni manzi kwemodyuli yokushaja, okusindisa izindleko
Inqwaba yokushaja ayidingi oxhumana naye we-AC, ukotini ongaqinisekisi ngothuli, ifeni yokukhipha, okonga cishe i-3000 RMB / ikhabethe
Ukuthatha inqwaba eyodwa eyi-120kw njengesibonelo, ukonga kwe-TCO kweminyaka emi-5 neminyaka eyi-10 kumayelana ne-10000 RMB ne-40000 RMB ngokulandelana
Isisombululo sokushaja esisheshayo esingu-30kW
UBo Jianguo, umphathi jikelele we-UUGreenPower, naye wethule omunye umkhiqizo wezinkanyezi, uchungechunge lwe-30kW yokushaja imodyuli enezincazelo eziningi zezimo ezahlukahlukene. Ngokusho kukaMnu Bai, le module ingahlangabezana nezidingo zokushaja okusheshayo kweziteshi zokushaja ezimweni ezahlukahlukene futhi isize amakhasimende ukuthi abone uhlelo lokufaka izindleko olungcono kakhulu. Isibonelo, i-750V / 40A yesiteshi sokushaja ibhasi, i-1000V / 30A yesiteshi sokushaja imoto ne-500V / 60A yesiteshi sokushintshana ngogesi. Ngaphezu kwalokho, kwimvelo yokuncipha kasawoti, kunemodyuli yokugcwalisa i-glue (f) module kanye nemininingwane ye-European (b) module yezimakethe zaseYurophu.
Isabelo semakethe ehamba phambili semodyuli yokushaja amandla angu-30kW
Ukucaciswa okuhlukahlukene kuyatholakala. I-750V / 40a, i-1000V / 30A ne-500V / 60A ifanele izimo ezahlukahlukene zokushaja, ezifana nesiteshi sokushaja ibhasi, isiteshi sokushaja imoto yomphakathi kanye nesiteshi sokushintshana ngogesi
Ukugcwaliswa okugcwele (f) kungakhethwa, kufanelekile ekusetshenzisweni okunzima kwemvelo
Ukucaciswa okujwayelekile kwase-Europe (b) ngokuzithandela, kufanelekile esiteshini esivamile sokushaja saseYurophu
Ngokuya ngezimo ezahlukahlukene, khetha imininingwane efanelekile ukufeza uhlelo oluhle kakhulu lokufaka izindleko
Minaukuqapha ngobuhlakani ye Ukushaja i-EV Isixazululo
Ngasikhathi sinye, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokufinyelela ezihambisanayo zomshini owodwa onezibhamu ezintathu ezidingwa yinqwaba yokushaja ejwayelekile yaphesheya kwezilwandle i-UUGreenPower iphinde yethule ngokukhethekile imodyuli yokuqapha inqwaba yemija04 kulo mbukiso. Iyunithi eyodwa yokuqapha ingahambisana nezindinganiso ezijwayelekile zaseYurophu, izindinganiso ezijwayelekile zaseJapan nezokuqapha ezijwayelekile zikazwelonke. Uma kuqhathaniswa nohlelo lwebhodi le-adaptha ejwayelekile emakethe, izindleko zokuqapha zingagcinwa cishe ngo-50%.
Ngokukhethekile eyenzelwe inqwaba entsha yokushaja amandla, enesibopho sokuxhumana nebhethri lamandla kagesi wemoto ukubona yonke inqubo yokushaja yenqubo
Ukusekelwa okuhlangene kwezinga likazwelonke, elejwayelekile laseYurophu nelaseJapan
Sekela isibhamu esisha sikazwelonke esivamile, isibhamu esijwayelekile saseYurophu, isibhamu esijwayelekile saseJapan, isibhamu esishintshanayo
Sekela umshini owodwa ngezibhamu ezintathu (CCS + chademo + AC)
Sekela umshini owodwa ngezibhamu ezintathu (CCS + CCs + GB / T)
Sekela umshini owodwa ngezibhamu ezintathu (CCS + chademo + GB / T)
Uma kuqhathaniswa nebhodi le-adaptha ejwayelekile emakethe, izindleko zokuqapha zingagcinwa cishe ngo-50%
Inqwaba ye-UBC series bidirectional V2G yokushaja
Kule ngxoxo, uMnu Bai ubalule ukuthi ukwanda okusheshayo kwenani lamaphayiphu okushaja nakho kulethe enye inkinga engeke yazitshwa. Ngo-2030, inani lezimoto ezintsha zamandla eChina lizofinyelela kwizigidi ezingama-80. Ngaleso sikhathi, ukutholakala okungalawuleki kwenqwaba yamaphayiphu okushaja kuzoholela ekushintsheni okukhulu komthwalo, okuzodala umthelela omkhulu kugridi yamandla. Uma kungekho zinyathelo ezithathwayo, izinkinga ezinkulu ezifana nokugcwala ngokweqile kwegridi yamandla ngisho nokutholakala kukagesi kungenzeki ngo-2020.
Ukushaja ngokuhlelekile sekuyindlela ebalulekile yokunciphisa noma yokuqeda lo mphumela. Ingakhombisa futhi iqondise isimilo sokushaja, isize igridi yamandla ukusika umthwalo omkhulu bese igcwalisa isigodi, ithuthukise ukusebenza kahle kwenethiwekhi yokusabalalisa kanye nokusebenza kwekhono legridi yamandla, futhi izuze isimo sokuwina phakathi kwabasebenzisi kanye negridi. Inqwaba yokushaja enomsebenzi we-V2G izoba ithuluzi elibukhali lokubona ukushaja okuhlelekile nokukhipha igridi yamandla.
Inqwaba ye-V2G yokubhidliza ohlangothini oluhamba kabili ye-UBC 75010 enomoya omhlophe wegobolondo elikhanyayo nokwakhiwa kwamahhashi kwatholakala edokodweni le-UUGreenPower. Umkhiqizo usebenzisa ukwakheka okuphezulu kwe-IP65 nokuhlukaniswa kwemvamisa ephezulu, ngobubanzi bamandla kagesi ahlala ebanzi nomklamo ophansi womsindo. Igridi exhunywe i-voltage ingakwazi ukuzivumelanisa nezinga likazwelonke, i-European standard ne-American Standard. Amandla alinganisiwe ngu-7KW, angakwazi ukuzivumelanisa nemvelo yokufaka ye-7KW AC yokushaja inqwaba. Ingashintshwa ngqo futhi inobuhle obuhle kakhulu bobunjiniyela.
"Cabanga ngalesi sigameko. Uma upaka imoto yakho kagesi endaweni yokupaka inqwaba ye-UBC yokushaja efakwe enkampanini emini, bese uthatha imoto ngemuva komsebenzi ebusuku, ngokunganakile uzokhokhisa inqwaba yama-yuan kwi-akhawunti yakho. Ingabe umuzwa okhululeke kakhulu? " Kusho uMnu Bai